SOLASOLV® Sary mibaribary sy randran-jiro manga ho an'ny Cruise and Ferry Solar Solve Marine
Ireo sary mihetsika amin'ny masoandro sy ny lozam-pifamoivoizana manga no mibaribary ho an'ny Cruise and Ferry
Fiara fitaterana - Passenger Ferries - ary sambo maro hafa!
Ny fialantsasatry ny fitsangantsanganana dia heverina ho mendri-piderana noho ny avo lenta sy ny isan'ireo fitaovana maoderina an-tsambo. Ny ankamaroan-tsambo dia manolotra safidy malalaka amin'ny safidy fisakafoanana, fialam-boly ary ny asa atao mba hihaonana amin'ireo mpizahatany maro.
Saingy raha ireo mpandeha no mankafy ny fiainana an-joron'ny fiainana, dia mihevitra ny fisian'ny sambo. Avy amin'ny mpitaingina sy ny mpiasan'ny fiandrasana, ho an'ny mpiasa an-trano sy ny mpihira, ny sambo iray dia miankina amin'ny fanoloran-tena sy ny fanoloran-tenan'ny ekipa rehetra ho an'ny laza sy ny fahombiazana.
Ny seranan-tsambo dia fitaovana manan-danja, miasa amin'ny tetezana amin'ny ekipa mandritra ny andro sy ny alina izay miantoka ny fiaramanidina sambo sy ny fiaramanidina. Noho ny maha-zava-dehibe an'io andraikitra io, ny toe-pahasalamana azo antoka sy azo antoka no laharam-pahamehana, ary ilaina ny mijery mazava tsara!
Ny SOLASAFE® Sunscreens dia manana antoka garage 7 taona.
Apetaho ny SolaSOLV® marika amin'ny anarany - tsy misy safidy hafa - mba hiantohana ireo fiaranao fiaramanidina manana fiarovana mahomby sy azo antoka indrindra azo ampiasaina amin'ny fanamboarana, fametahana, fanavaozana ary fanovana vaovao… .marina hiasa sy hikolokoloana maimaimpoana.
Ny fampiononana ny mpandeha dia zava-dehibe indrindra amin'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo, na izany aza, rehefa miresaka momba ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia matetika no miatrika ny fahasarotana amin'ny fividianana entana kalitao izay toa tsara ary mahazaka tontolo iainana. Ireo no antony sasany amaritan'ny tompon'ny sambo fitsangantsanganana manerana izao tontolo izao ny marika ROLASOLV®.
Ny jiron'ny jiro CASSLITE® dia napetraky ny Solar Solve Marine teknika tao amin'ny Starlight Lounge ary napetany tao Victoria. Ny jiro jiro LITETITE® dia napetraka teo am-baravarankelin'ny Horizon Lounge tao Arcadia miaraka amin'ireo jiro DIMMLITE® izay napetraka tao amin'ny sehatra Captains Lounge sy ny efitra fisakafoana.
Ny jiron'ny jiro ROLASOLV® dia mety tsara ho an'ny varavarankelin'ny trano fisakafoanana rehetra, anisan'izany ny sambo fiara sy trano fisotroan-toaka, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, sinema, trano fisakafoanana sy toerana fitehirizana.
Solar Solve dia afaka manamboatra blinds roller namboarina ho fizarazaran-damba hampiasaina amin'ny foy, kioska, tobim-panompoana ary ny kaonteran'ny serivisy mba hanakatonana ny faritra aorian'ny ora maromaro na eo am-panomanana ny sakafo - vokatra mora ampiasaina amin'ny kalitao avo indrindra amin'ny famolavolana asa sy mahavita.
STOPLITE® mavo mavo mavo ny jiro
STOPLITE® dia jiro jiro mitandahatra ao anaty cassette alimondrano fiarovana. Izy io dia miaraka amin'ny fantsom-pitaovana roa ary ny làlam-barim-baravaran'ny hazavana. Mampihena ny tara-pahazavana ny tara-pahazavana mba hamoronana ny fepetra takin'ny andro tory. Tsy misy gadra sy TSY TSY mamela faritra mihidy tsy misy fikomiana. Ny lalamby noforonina manokana dia azo afindrana avy hatrany amin'ny toerana rehetra handehanana toy ny masolavitra masoandro raha tsy takiana ny efitrano maizimaizina.
Ny fitsipika STOPLITE® Ny jiro mitaingina dia natolotry ny lamosina fanamafisana ny lamosina amin'ny alàlan'ny fisafidianana loko ary azo amidy sy mandefa azy ao anatin'ny andro vitsy, arakaraka ny habetsaky ny zavatra takiana. STOPLITE® dia azo amidy amin'ny tapa-taratasy avy amin'ny KVADRAD ao anatin'ny lamosin'ny afo miverimberina amin'ny vidiny fanampiny.
Ny fanamorana ny fampiasana fefy dia miorina amin'ny lalamby ambany mba hanakanana izany amin'ny toerana takiana. The STOPLITE® Ny jiro amin'ny jiro dia fitaovana vaovao ao amin'ny Solar Solve Marine RolaSOLV® ny fandaharan'asan'ny Sun Protection Systems ary ny endrika ankatoavin'ny DNV ho an'ny sambo rehetra amin'ny sambo rehetra.
STOPLITE® manana tombontsoa maro
Safidy ny loko
Fiarovana amin'ny taona 2
Karazana nankatoavin'ny DNV
ROLASOLV® Fabric Roller sy Blackout Blinds dia karazana nankatoavin'ny DNV hanaporofoana fa mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna farany.
Sambo sy sambo sambo sasantsasany avy amin'ny vokatra Solar Solve: